स्वास्थ्य बिमा महिलालाई बरदान |
स्वास्थ्य बिमा महिलालाई बरदान
प्रकाशित मिति :2016-03-23 10:26:58
बाँकेका १५ गाविस र कोहलपुर नगरपालिका तथा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा सञ्चालित स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम विपन्न महिलाका लागि बरदान सावित भएको छ, कसरी ?
बाँके । कोहलपुर– २ की कमला सापकोटा पाठेघर खस्ने, ग्यास्ट्रिक, पेट पोलिरहनेजस्ता स्वास्थ्य समस्याले ग्रसित थिइन् । विभिन्न रोगले आक्रमण गरेपछि उनलाई धेरै दिन बाँचिन्न कि भन्ने चिन्ताले पिरोलिरहन्थ्यो ।
हप्तैपिच्छे अस्पताल जानुपर्ने र दैनिक औषधि खानुपर्ने भएपछि आर्थिक समस्या बढ्दै गयो । कमलालाई उपचारका लागि पैसा जुटाउन हम्मेहम्मे परिरहेको थियो । आफन्तसँग सरसापट गरेर उपचार गर्दै आएकी उनी यस्तो समस्यामा पुगिन् अब रोग लागेरभन्दा पनि ऋण बढ्दै गएर मरिएला भन्ने भयो । पछि गाउँकै एक साथीको सम्पर्कबाट उनले स्वास्थ्य बिमा गरिन् । दुई वर्षअघि आफ्नो स्वास्थ्य बिमा गरेपछि कमलाले राहत पाइन् । अहिले उनले आफ्नो उपचारका लागि लाग्ने रकम बिमा कम्पनीबाट पाउन थालेकी छिन् ।
कमलाले वार्षिक चार सय ९० रुपैयाँ तिरेर स्वास्थ्य बिमा गराएकी हुन् । नेपालगन्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरमा पाँचपटकसम्म चेक–जाँच गराएको र नजिकैको औषधि पसलमा औषधि किनेको सबै रकम उनले बिमा कम्पनीबाट पाएकी छिन् । बिमा कम्पनीले उपचार खर्च दिएपछि आफूले नयाँ जीवन पाएको उनको भनाइ छ । ‘आफ्नो पैसाले पाँचपटकसम्म चेक–जाँच गराउन र औषधि किन्न कहाँ सक्थेँ र ? बिमाबाट पैसा पाइने भएकाले नै औषधि–उपचार गराउन सकेँ । अहिले मेरो स्वास्थ्यमा सुधार आएको छ ।’
स्वास्थ्य बिमाबाट आफ्नो उपचारमा राम्रो सहयोग पाएपछि परिवारका पाँच सदस्यको पनि स्वास्थ्य बिमा गराएकी कमला भन्छिन्, ‘स्वास्थ्य बिमाले गरिब र रोगीलाई नयाँ जीवन दिँदोरहेछ ।’ रोगको उपचार गर्न नसकेर जीवनमरणको सङ्घारबाट बचेकी कमला अहिले त्यस क्षेत्रका विपन्न, गरिब र मजदुर वर्गलाई स्वास्थ्य बिमा गर्न प्रोत्साहित गर्दै आएकी छिन् ।
टिटिहिरिया–३ की चन्द्राणी थारूले घरका चार सदस्यसहित आफ्नो स्वास्थ्य बिमा गराएकी छिन् । लामो समयदेखि तल्लो पेट दुख्ने समस्याले थला परेकी चन्द्राणीले खर्चको अभावमा उपचार गर्न सकेकी थिइनन् । ‘आफ्नो खर्चमा नेपालगन्जमा उपचार गराउन के सकिन्थ्यो ? बिमाका कारण उपचार भयो,’ उनले खुसी हुँदै भनिन् । चार सय ९० रुपैयाँ तिरेर स्वास्थ्य बिमा गराएकी चन्द्राणीको उपचारमा ५० हजारजति खर्च भयो । त्यो रकम उनले बिमा कम्पनीबाट पाइन् ।
स्वास्थ्य बिमा गराएका व्यक्तिले औषधि–उपचार गराउँदा सुरुमा आफैँले पैसा तिर्नुपर्छ । उपचारपछि औषधि–उपचार गर्दा लागेको बिल पेस गरेपछि बिमा कम्पनीबाट त्यो रकम फिर्ता पाइन्छ । स्वास्थ्य बिमा गरेका मान्छेलाई औषधि–उपचार गर्दा पैसा नपुगे पनि सापटी वा ऋण पाउन अन्य व्यक्तिलाई भन्दा सहज छ । आफन्त, छिमेकी तथा गाउँका बचत समूहले पनि बिमाको पैसा आएपछि तिर्न सक्छ । सापटी वा ऋण दिएको पैसा डुब्दैन भनेर सहजै पैसा दिन्छन् ।
नेपालगन्ज– ७ की राधा साहले स्वास्थ्य बिमाको रकमबाट अहिलेसम्म सातपटक उपचार गरिसकिन् । ‘बिमाबाट ठूलो र महँगो अस्पतालमा औषधि गर्ने मौका पाएँ,’ उनले भनिन्, ‘गरिब र विपन्न व्यक्तिलाई यो ठूलो फाइदा रहेछ । वर्षको चार सय ९० रुपैयाँमा जीवनदान पाइनेरहेछ ।’ राधा भन्छिन्, ‘सुरुमा विश्वास लागेको थिएन, तर साँच्चै बिमा त हाम्रा लागि बरदानै सावित भएको छ ।’
गरिब परिवारका महिलाको बिमा कार्यक्रममा आकर्षण बढेको छ । पाँच वर्षअघि जिल्लामा सुरु भएको समुदायमा आधारित लघु स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत सुरु भएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले त्यहाँका महिलालाई स्वस्थ जीवन बाँच्नुपर्छ भन्ने चेतना भरिदिएको छ । एकपटक चार सय ९० रुपैयाँ तिरेर गरेको बिमाले वर्षभरि उपचारखर्च पाउने भएपछि विपन्न महिला यसतर्फ आकर्षित भएका हुन् । महँगो अस्पतालमा जटिल रोगको उपचार गराउन नपाउने महिलाले बिमाको रकमले जिल्लादेखि राजधानीका महँगा अस्पतालमा समेत उपचार पाउँछन् । ‘पहिला उपचारमा पैसा खर्च गर्नुभन्दा हामी गाउँमै धामीझाँक्री लगाउँथ्यौँ,’ टिटिहिरिया– २ की रीता थारूले भनिन्, ‘स्वास्थ्य बिमा थालेपछि सानो समस्यामा पनि महँगा अस्पतालमा डाक्टरलाई भेट्छौँ ।’ उनले आफ्नो कथा यसरी सुनाइन्, ‘स्वास्थ्य बिमा गराएकै कारण सात महिनाअघि नेपालगन्ज मेडिकल कलेजमा तल्लो पेट र टाउको दुख्ने समस्याका लागि भिडियो एक्स–रे, रगत, दिसापिसाब जाँच गराएर उपचार गराएँ । उपचार गराउँदा २८ हजार खर्च भयो । खर्च भएको रकम बिमाबाट पाएँ ।’
०६८ सम्म बाँकेमा चार हजार ७६ जनाले स्वास्थ्य बिमा गराएका थिए । स्वास्थ्य बिमा गराउनेको सङ्ख्या बढेर ०७२ असारसम्म ४९ हजार आठ सय ७३ पुगेको छ । यस अवधिमा १४ हजार तीन सयले उपचार गर्दा लागेको रकम बिमा कम्पनीबाट भुक्तानी पाइसकेका छन् । उनीहरूले बिमा कम्पनीबाट उपचार खर्चबापत एक करोड १६ लाख ८३ हजार दुई सय ७० रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन् ।
बाँकेका १५ गाविस र कोहलपुर नगरपालिका तथा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । १६ हजार पाँच सय ६४ घरधुरी स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध छन् । स्वास्थ्य बिमातर्फ सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्दै गएको र लाभान्वित हुने सङ्ख्या बढेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम जिल्ला मूल समिति संयोजक पूर्णिमा शाहीले बताइन् । यसबाट महिला, बालबालिका धेरै लाभान्वित छन् । ‘वार्षिक चार सय ९० रुपैयाँ शुल्क तिरे स्वास्थ्य बिमा हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत एक व्यक्तिले वार्षिक ४२ हजार रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च पाउँछन् ।’ स्वास्थ्य बिमा गराउनेले बाँके जिल्लाभित्रका २६ अस्पतालमा उपचार सेवा पाउँछन् भने काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर र चितवनका सबै सुविधासम्पन्न अस्पतालमा सेवा लिन पाउँछन् ।
स्वास्थ्य बिमाबाट उपचार सेवा पाउनेमा ६३ प्रतिशत महिला छन् । २२ प्रतिशत बालबालिका र १५ प्रतिशत पुरुष रहेको तथ्याङ्क छ । जटिल बिराम लाग्दा पनि अस्पताल जान नसकी रोग सहेर घरमै बस्न विवश विपन्न र गरिब महिला प्रत्यक्ष रूपमा यो कार्यक्रमबाट लाभान्वित छन् ।
स्वास्थ्य बिमा गराएका महिलामध्ये अधिकांशले पाठेघर, तल्लो पेट दुख्ने, टाउको, छाती दुख्ने, हात, जोर्नी समस्या, आँखा, कान, घाँटीसम्बन्धी रोग जँचाएका छन् । बिमा कार्यक्रमका फोकल पर्सन जिताराम गौतम भन्छन्, ‘स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम गरिब तथा विपन्न समुदायका लागि बरदान सावित भएको छ ।’
(टेकेन्द्र, नेपालगन्जका पत्रकार हुन् ।)